ရာသီကုနျမှာ ယူနိုကျတကျကို ပွနျလာမညျ့ တိုကျစဈမှူးတဈဦး။ – SoShwe
Home/Sport/ရာသီကုနျမှာ ယူနိုကျတကျကို ပွနျလာမညျ့ တိုကျစဈမှူးတဈဦး။
ရာသီကုနျမှာ ယူနိုကျတကျကို ပွနျလာမညျ့ တိုကျစဈမှူးတဈဦး။
So Shwe January 26, 2020	Sport Leaveacomment
ယူနိုကျတကျအသငျးမှ အငျတာမီလနျအသငျးကို အငှားဖွငျ့ သှားရောကျကစားနသေညျ့ အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျကို ရာသီကုနျ၌ ပွနျလညျချေါယူရနျ ယူနိုကျတကျအသငျးက ပွငျဆငျနပေါတယျ။ အဆိုပါခြီလီလကျရှေးစငျ တိုကျစဈကစားသမားသညျ ပွီးခဲ့သညျ့နှရောသီကမှ အငျတာမီလနျအသငျးကို တဈနှဈ အငှားစာခြုပျနဲ့ ပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
The Mirror သတငျးစာရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ ဆနျးခကျြဇျရဲ့ ယူနိုကျတကျကစားသမားဘဝကို ပွနျလညျအသကျဆကျစရေနျ ပွငျဆငျနပွေီး အသငျးရဲ့အမှုဆောငျခြုပျ အကျဝုဒျဝကျကလညျး ဆနျးခကျြဇျကို အပွီးသတျလကျမလှတျလိုဘဲ ရာသီကုနျ၌ အသငျးကို ပွနျလညျချေါယူရနျ ဆန်ဒရှိနပေါတယျ။ အသကျ (၃၁) နှဈအရှယျ အဆိုပါကစားသမားသညျ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ပှဲပေါငျး (၄၅) ပှဲကစား၊ (၅) ဂိုးသှငျးယူပေးထားသညျ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး အသငျးနဲ့ (၂၀၂၂) ခုနှဈ နှရောသီအထိ စာခြုပျသကျတမျး ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဆနျးခကျြဇျကိုယျတိုငျကမူ အငျတာမီလနျအသငျးအတှကျ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့မရရှိသညျ့တိုငျ အီတလီ၌သာ ဆကျရှိနလေိုပွီး သူ့ရဲ့အငှားစာခြုပျ၌ အငျတာမီလနျအသငျးက တဈပါတညျး အပွီးသတျချေါယူခှငျ့ မပါရှိကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ရာသီကုန်မှာ ယူနိုက်တက်ကို ပြန်လာမည့် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦး။
ယူနိုက်တက်အသင်းမှ အင်တာမီလန်အသင်းကို အငှားဖြင့် သွားရောက်ကစားနေသည့် အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ်ကို ရာသီကုန်၌ ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် ယူနိုက်တက်အသင်းက ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အဆိုပါချီလီလက်ရွေးစင် တိုက်စစ်ကစားသမားသည် ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကမှ အင်တာမီလန်အသင်းကို တစ်နှစ် အငှားစာချုပ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
The Mirror သတင်းစာရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဆန်းချက်ဇ်ရဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝကို ပြန်လည်အသက်ဆက်စေရန် ပြင်ဆင်နေပြီး အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်ဝက်ကလည်း ဆန်းချက်ဇ်ကို အပြီးသတ်လက်မလွှတ်လိုဘဲ ရာသီကုန်၌ အသင်းကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ အသက် (၃၁) နှစ်အရွယ် အဆိုပါကစားသမားသည် ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ပွဲပေါင်း (၄၅) ပွဲကစား၊ (၅) ဂိုးသွင်းယူပေးထားသည့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသင်းနဲ့ (၂၀၂၂) ခုနှစ် နွေရာသီအထိ စာချုပ်သက်တမ်း ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆန်းချက်ဇ်ကိုယ်တိုင်ကမူ အင်တာမီလန်အသင်းအတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရရှိသည့်တိုင် အီတလီ၌သာ ဆက်ရှိနေလိုပြီး သူ့ရဲ့အငှားစာချုပ်၌ အင်တာမီလန်အသင်းက တစ်ပါတည်း အပြီးသတ်ခေါ်ယူခွင့် မပါရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous Eminem တဈယောကျ Gay Dating App ကို အသုံးပွုနပွေီလား ? ? ?
Next အငျတာမီလနျကစားသမားတဈယောကျကို ပေါငျသနျး (၈၀) ပေးပွီးချေါယူရနျ ပွငျဆငျနသေညျ့ မနျစီးတီး။